Block Machine, Block Kuita Machine, Brick Machine - Huarun Tianyuan
Qty dzino otomatiki misa Machine
QTJ akatevedzana Semi / Chinyorwa zvokuimba misa Machine
BWY akatevedzana perlite kuputira Panel Machine
Clay Brick Kugadzirwa Machine
Chinjwa misa Kugadzirwa Machine
QX akatevedzana EPS kuputira misa Machine
Pane 5 dziri zvinhu zvedu, Qty series, QTJ series, BWY series, QX akatevedzana uye AAC mutsetse zvakasiyana kushanda munzvimbo.
Otomatiki Block Machine
Ndivo Electrio-Hydraulic-Machanical kusangana hurongwa. With zvakangwara kuzvidzora hurongwa PLC, kurimwa mitsetse vane zviri nyore kuzvidzora, zvishoma basa, etc. The mhando vari QTY12-15, QTY10-15, QTY8-15, QTY6-15A / B / C, QTY4-15A / B / C, QTY4-20C, QTY3-15.
Semi otomatiki misa Machine
Dzino michina zvidiki zvemaziso yokutevedzera. Semi otomatiki kana manual.The zvinhu zviri zvishoma cost, nyore kuvhiyiwa, nyore kuramba. The mhando vari QTJ4-25, QTJ4-26C / D, QTJ4-35B2, QTJ4-40.
Brand mu "TIANYUAN", redu nechigumbuso michina apfuura ISO9001 uye CE advertising. Tingaedza kukurairisai mumwe muchina vasati rokukwidza rekuona mumwe muchina kuti vatengi vanogamuchira ane yepamusoro uye kwazvo unongotaura.
Svikiro kadikidiki QTY4-20C otomatiki chinogumbura nokuparira Ma ...
Big muchina womuenzaniso QTY12-15 yakakwirira chinzvimbo misa ...
High goho womuenzaniso QTY10-15 otomatiki simende hol ...
Hot Kutengeswa QTY8-15 zvizere kwangoitwa chinogumbura nokuparira M ...
QTY6-15A Automatic kongiri misa nokuparira Machine
QTJ4-40 Manual misa nokuparira Machine
QTJ4-26D mhango misa nokuparira Machine
Tianyuan Machinery hwagadzwa muna 1990, iri Dazhuang Zone, Yinan, linyi guta, Shandong dunhu, China.
Ivo Electrio-Hydraulic-Machanical kusangana hurongwa. With zvakangwara kuzvidzora hurongwa PLC, kurimwa mitsetse vane zviri nyore kuzvidzora, zvishoma basa, etc. The mhando vari QTY12-15, QTY10-15, QTY8-15, QTY6-15A / B / C, QTY4-15A / B / C, QTY4-20C, QTY3-15 .
Tine chikwata guru revanhu 200. Ndivo mainjiniya akadzidza zvikuru, ruzivo wevanamakanika, vashandi vane unyanzvi, chakanakisisa rokutengesa, etc. Kunze Chinese chikwata, isuwo tine chikwata wakanaka muBangladesh vari achivapa basa zvizere omunharaunda.
With zvikwata zvedu 'vaishanda nesimba, tiri kupa nokukurumidza wobvunzisisa basa, muchina uye achitanga kugadzira, yepamusoro zvigadzirwa, basa chokugadza mushure kutengeswa basa. Kubva pfungwa yako kutanga kwako dzaFord kutanga, tiri nguva dzose parutivi rwako.